तपाईंको आफ्नै TRON आधारित स्मार्ट सम्झौता MLM सफ्टवेयर लन्च गर्नुहोस् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
जनवरी 20, 2021 जनवरी 19, 2021 एरिया ब्रेनेल ब्लग, व्यापार, क्रिप्टोकरन्सी सेवा, विशेष समाचार
बहु-स्तर मार्केटिंग, नामले सlies्केत गरे अनुसार, उत्पादन वा सेवा बेच्नको लागि काम गर्ने सेल्सपाइलका विभिन्न स्तरहरू छन्।
यदि एक व्यक्तिले बिक्री गर्दछ भने, त्यो विशेष बिक्रीमा उनीहरूले एक कमिशन पाउनेछ।
थप रूपमा, त्यहाँ व्यक्तिमाथि स्तर रेफरल बोनस पनि रिपोर्ट गरिएको छ जसले बिक्री गरेको छ र यस प्रकारको व्यवसायको नाम कमाईरहेको छ।
बहु-स्तर मार्केटिंग वा MLM सामान्य रूपमा संक्षेप गरिएको रूपमा हालको इतिहासमा मार्केटिंगको सबैभन्दा लोकप्रिय विधिहरू मध्ये एक हो। एमएलएम व्यवसायहरूको विशाल लोकप्रियतामा के योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने तथ्य यो हो कि यो खुल्छ र एक अवसरमा सिक्ने अवसर जुन कहिल्यै अस्तित्वमा कहिल्यै पढाइएको थिएन। यद्यपि, घोटालाको व्यापक घटनाहरूका कारण, MLM व्यवसायले यसको चमक गुमाएको छ।
MLM व्यवसाय मा चुनौतिहरु
यो अस्वीकार गर्न सकिदैन कि केहि MLM योजनाहरू मानिसहरूलाई घोटाला गर्ने उद्देश्यको साथ सिर्जना गरिएको थियो। जहाँसम्म, केहि वास्तविक MLM व्यवसायहरु को लागी केहि मानिसहरु को दुर्भावनापूर्ण आशय को कारण ग्रस्त भयो।
यी चुनौतिहरूले कसरी व्यवसायलाई असर गरेको छ भनेर बुझ्नको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि MLM ले कसरी कार्य गर्दछ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। बहु-स्तर मार्केटि,, नामले सlies्केत गरे अनुसार, उत्पादन वा सेवा बेच्नको लागि काम गर्ने विभिन्न स्तरका सेल्सपाईलहरू छन्। यदि एक व्यक्तिले बिक्री गर्दछ भने, त्यो विशेष बिक्रीमा उनीहरूले एक कमिशन पाउनेछ। थप रूपमा, त्यहाँ व्यक्तिमाथि स्तर रेफरल बोनस पनि रिपोर्ट गरिएको छ जसले बिक्री गरेको छ र यस प्रकारको व्यवसायको नाम कमाईरहेको छ।
एक MLM व्यवसाय को लागी समृद्धि को संकेत नेटवर्क मा मान्छे को संख्या हो। बढ्दो संख्याले व्यवसायमा चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ। एक तर्फ, बहुउद्देशियाहरूमा उच्च तहमा विशेष तहको सम्पूर्ण मार्ग पत्ता लगाउन कुख्यात गाह्रो हुन्छ। जब नम्बरहरू ठूलो हुन्छन्, बिक्रीको संख्या पनि बढ्दछ र आयोगको भुक्तानी पूरा गर्न चुनौती हुन्छ। यदि हामीले यस परिदृश्यलाई अर्को साइडबाट हेराइ दियौं भने, यो प्रस्ट देखिन्छ कि यदि एमएलएम व्यवसायले यी दुई समस्याहरू समाधान गर्दछ भने, यो अझ सक्षम र विश्वासयोग्य बन्न बाध्य छ। आधारभूत समस्याहरूलाई दुई सरल समाधानहरूमा सरलीकृत गर्न सकिन्छ: भुक्तानीहरूको स्वचालन र ट्र्यासेबिलिटीमा सटीकता।
तपाइँको विज्ञापन यहाँ पेश गर्नुहोस् ...
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: ग्लोबल ताजा दूध बजार अनुसन्धान रिपोर्ट २०२१-२०2021२ - ग्रुप लेक्टलिस, एडीएम, सीएचएस, मनिल्ड्रा समूह
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: विश्वव्यापी प्राकृतिक खनिज पानी बजार अनुसन्धान रिपोर्ट २०२१-२०2021 - - डोनोन, बong्ग्रेन, देवन्डेल मरे गोल्बर्न, फोन्टेरा
स्थापित वेबसाइटहरूबाट सामग्री लि Links्कहरू प्राप्त गर्नुहोस्
म तपाईंलाई २ M मिलियन प्रमाणित ईमेलहरू दिन्छु
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: सीरियल कन्सोल सर्भर मार्केट २०37० सम्ममा अमेरिकी डलर $ B$ बिलियन हुनेछ - COVID-१ Pand पाण्डैमिक ईम्पेडि Market मार्केट विस्तारको बीचमा आपूर्ति मुद्दाहरू
TRON - उत्तर
अब हामी नयाँ डिजिटल, अपरिवर्तनीय, पारदर्शी, र सुरक्षित लेजरलाई blockchain भनिनको लागि अलि डिग्रेस गरौं। जे होस् ब्लकचेन मुख्यतया क्रिप्टोकुरन्सीसँग सम्बन्धित छ, यसमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन्। यदि तपाइँले फेरि ब्लकचेनको विशेषताहरू पढ्नु भयो भने, तपाइँ अनुमान गर्नुहुनेछ कि यो MLM उद्योगले सामना गर्ने समस्याको सम्भावित समाधान हुनसक्दछ।
MLM ठाउँ सम्बोधन गर्नका लागि एक अनन्य प्रयासमा, एक नयाँ प्रकारको blockchain सिर्जना गरिएको थियो र यसलाई TRON भनियो। TRON सन् २०१ 2017 मा सिंगापुरको शहर-राज्यमा एक नाफारहित संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यो विकेन्द्रीकृत प्लेटफर्म हो जुन उच्च स्केलेबिलिटी, सत्य, र TRON इकोसिस्टममा निर्मित सबै विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरूको लागि उपलब्धता सहित सुसज्जित छ।
TRON नेटवर्कको मूल टोकनलाई Tronix भनिन्छ, सामान्य रूपमा संक्षिप्त TRX। यस सिक्काको कम्तिमा २ बिलियन डलरको बजार पूंजी रहेको छ र त्यहाँ करिब 2१ अरब सिक्का अहिले चलनमा छन्। बजार विज्ञहरूले भविष्यवाणी गरे कि २०२71 सम्ममा यस सिक्काको मूल्य 5/ १/२ सेन्ट हुनेछ जुन स्थिर वृद्धि मान्न सकिन्छ। किनकि TRON खुला स्रोत हो, तपाईं आफ्नो व्यापारको कार्यक्षेत्रका लागि आफ्नै TRON अनुप्रयोगहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सुविधाहरू र प्लग-इन्सको साथ तपाईंको अनुप्रयोग पनि गार्निश गर्न सक्नुहुनेछ। TRON को स्केलेबिलिटीले सुनिश्चित गर्दछ कि एक व्यक्ति देखि एक स्थापित ईन्टरप्राइज सम्म सबैले यो ब्लकचेन चिकनी र सुव्यवस्थित कार्यक्षमताको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ।
TRON सँग सबै प्रमाणपत्रहरू छ जुन MMM उद्योगले खोजिरहेको थियो उत्तम रामबाँचा हुन आवश्यक छ।
सायद सबैभन्दा ठूलो फाइदा जुन TRON को प्रासंगिकता र उपयुक्ततामा योगदान गर्दछ लेनदेन गति हो। TRON सँग एक आश्चर्यजनक २,25,000,००० TPS मा लेनदेन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ। यो बिटकोइन र इथरियम जस्ता मुख्यधाराको ब्लकचेन भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ।
स्वाभाविक रूपमा, एक blockchain पारदर्शी छ, यसलाई traceable बनाउने। त्यसकारण, सहि व्यक्तिलाई एक विशिष्ट बिक्री श्रेय सरल र सीधा हुन्छ। TRON blockchain को अर्को सुविधा जुन अगाडि आउँदछ अमिटता। एक पटक blockchain मा प्रवेश रेकर्ड एक सार्वभौमिक सहमति प्राप्त नभएसम्म छेड़छाड गर्न असम्भव छ। जस्तो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कपटपूर्ण लेनदेनको लागि विश्वव्यापी सहमति हासिल गर्न सकिदैन!
Blockchain को केन्द्र मा MLM व्यवसाय को लागी TRON स्मार्ट अनुबन्ध छ। स्मार्ट सम्झौता एक स्वयं-कार्यान्वयन गर्ने प्रोग्राम हो जुन केवल केही सर्तहरू पूरा हुँदा ट्रिगर हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो ब्लकचेन भित्र स्मार्ट सम्झौता को प्रतिबन्ध र नियमहरु हटाउन लगभग असम्भव छ। एक TRON स्मार्ट अनुबन्ध स्वचालित छ र यो कुनै मानवीय हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न सक्दछ।
स्वाभाविक रूपमा, एक blockchain पारदर्शी छ, यसलाई traceable बनाउने।
यो संग TRON मा स्मार्ट अनुबंध MLM विकास ठाउँमा, आयोग को भुक्तानी स्वचालित गर्न सकिन्छ। यसलाई TRON को प्रदर्शनको साथ संयोजन गर्दै, भुक्तानहरू लगभग तत्काल छन्, धेरै MLM प्रयोगकर्ताहरूको आनन्दको लागि। सम्पूर्ण इकोसिस्टम स्वचालित भएकोले, यसले अप्रचलित पनि प्रदान गर्दछ, MLM व्यवसायमा बिचौलिया र मध्यस्थहरूको अवधारणा। तसर्थ, यी अपरेशन्सको साथ सम्बन्धित लागत पनि घटाउँदछ, ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण गर्न।
त्यहाँ लेनदेन शुल्कमा प्रश्नहरू हुन सक्छन्, जसलाई ब्लकचेनको सन्दर्भमा अतिथि शुल्क पनि भनिन्छ। TRON को उच्च प्रदर्शनको बिल्कुल विपरीत, प्रति लेनदेनको लागत यो अविश्वसनीय रूपमा कम छ, यसले एक MLM व्यवसायको लागि आदर्श उम्मेदवार बनाउँछ।
यदि तपाइँ सम्झना गर्नुहुन्छ भने, TRON प्रोजेक्ट एक नाफारहितको रूपमा शुरू भयो र पूर्ण विकेन्द्रीकृत छ। त्यसकारण, सम्पूर्ण MLM व्यवसायसँग असीमित रूपमा क्षमता छ किनकि त्यहाँ कुनै एकल मालिक वा अफिस वा प्रणाली छैन जुन सम्पूर्ण नेटवर्कलाई ध्वस्त पार्न लक्षित गर्न सकिन्छ।
के यसले काम गर्यो?
त्यहाँ धेरै MLM व्यवसायहरू छन् जसले नाफा र सफलताको लागि तिनीहरूको बाटोको शक्ति बनाउन TRON blockchain प्रयोग गरेका छन्। स्मार्ट अनुबंध MLM जस्तै Forsage यस्तो एक TRON स्मार्ट अनुबन्ध MLM प्लेटफर्म हो जसले विश्वलाई संख्यामा प्रमाणित गर्यो कि TRON कती शक्तिशाली छ जब यो व्यापारको लागि बेस प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग भैरहेको हुन्छ र यसका सबै गतिविधिहरू। Forsage हरेक हप्ता लगभग2मिलियन र 16,000 लेनदेन ह्यान्डल गर्दछ।
अब जब TRON को प्रासंगिकता र बहुमुखी प्रतिभा अनुमोदित भएको छ, यो धेरै क्राइप्टो उद्यमीहरूको आफ्नै चासोमा छ TRON- आधारित स्मार्ट सम्झौता MLM सफ्टवेयर शुरू गर्न। त्यहाँ TRON मा एक स्मार्ट सम्झौता आधारित MLM सफ्टवेयर लाभदायक छ भन्नेमा निश्चितता छ।
पहिलो चरण एउटा TRON [TRX] स्मार्ट सम्झौता MLM सफ्टवेयरको निर्माणको लागि हो हो TRON- आधारित MLM विकासको प्रक्रियामा लगानी गर्न। प्रतिष्ठित blockchain विकास कम्पनीहरु को एक धेरै TRON मा स्मार्ट अनुबंध आधारित MLM सफ्टवेयर निर्माण मा विशेषज्ञता। यदि तपाईं तिनीहरूसँग सम्पर्कमा बस्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंको आवश्यकता बुझ्नको लागि ख्याल राख्नेछन् र तपाईंमा क्रिप्टो उद्यमीको लागि उत्तम MLM समाधानको साथ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
सांप्रदायिक समाचार TRON मा स्मार्ट अनुबंध MLM TRON स्मार्ट अनुबंध विकास
महामारी कागज ढिलाइबाट बच्नुहोस् - IRS २०२० फाईलिंग सीजन खोल्नको लागि तयारीको रूपमा छिटो फिर्तीको लागि प्रत्यक्ष निक्षेपको साथ ई-फाईल प्रयोग गर्नुहोस्।
समीक्षा - प्रोहरू र अब खरीदको कन्स, पछि अनुप्रयोगहरूलाई भुक्तान गर्नुहोस्
आगो र बरफ - तेल अप अमेरिकन फ्रीज रूपमा
युरोपेली संघ र रसियाका बारे अपडेटहरू
लुइसियानामा थोक र B2B बजार मूल्यहरू
तिजुआना मेक्सिको (थोक - B2B मार्केटप्लेस) अनलाइन र बचत गर्नुहोस्
मिंट्स (होलसेल - B2B मार्केटप्लेस) शप अनलाइन र बचत गर्नुहोस्
अमेरिका - रेकर्ड जनवरी हाइलाइट्स हट हाउसिंग मार्केट
Foxconn, ईभिस मा Fisker टिम अप
पुरिमको बिदा इजरायल र यहूदी संसारमा मनाइन्छ
तपाईको कोरोनाभाइरस बिरालाका लागि उत्तम उत्पादनहरू
कसरी तपाइँको पूर्वस्कूली बच्चालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सिक्न मद्दत गर्ने
कसरी पौंडी खेल्ने धम्कीले जोखिम कम पार्छ?
अमेजन बनाम अलाबामा - अब्राम लडाईमा सामेल छन्
पूर्व डीईए चीफ: एल मेन्को एल चापो भन्दा बढी इक्लुसिटी
SCOTUS ट्रम्प विरुद्ध ट्रिपल प्ले उद्धार गर्दछ
किन अफिसहरू स्थानान्तरण गर्नु तपाईंको व्यवसायलाई रिब्रेन्ड गर्न उत्तम समय हुन सक्छ
बीबीले बिडेनलाई इरान आणविक सम्झौताको पुन: जॉइन गर्ने बारे चेतावनी दिन्छ
अलीबाबा - चीन कमिला ट्रिप्स तैनात गर्दछ